London: Dalka UK oo weli kolba ha helayo Bambooyinkii dagaalkii labaad ee dunidu uu Jarmalku ku garaacay | SDWO.COM & SomalilandNews.net
London: Dalka UK oo weli kolba ha helayo Bambooyinkii dagaalkii labaad ee dunidu uu Jarmalku ku garaacay
Published on May 22, 2015 by sdwo · No Comments
Garoonka weyn ee kubada cagta ee Wembely Stadium ayaa meel aan sidaa uga sii fogeyn waxa manta laga helay Bambo weyn oo kuwa diyaaradahu soo tuuraan ah oo culayskeeda lagu sheegay 50KG. Bambadan ayaa waxa helay shaqaale ka shaqanayey guri u dhow garoonka oo ay dhulka qodayeen.
Markiiba waxa goobta la wareegay ciidanka meleteriga ee u tababaran farsamaynta walxaha qar, iyadoo ciidanka booliskuna xidhay nawaaxiga u dhow gurigaas laga helay ilaa iyo 400 meter, iyadoo dadkii deganaa iyo meheradahii ganacsigaba laga dad gureeyay nawaaxigan.
Khuburada ku hawlan soo saarida bambkan ayaa sheegay inay tahay mid dhagaraysan ama live ah oo anytime qarxikarta, iyadoo hadii ay qaraxdana khasaarebadan geysan karta. Bambadan ayaa qiyaastii la sheegay inay ka mid ahayn duqaymahii xaga circa uu ku sameeyey Hilter sanadadii afartameeyahii. Sanad kaste goobo kala duwan oo ku kala filiqsan UK ayaa laga helaaa bambooyin noocan oo kale ah, iyadoo la aaminsanyahay in weli qaar badani ay dhulka ku aasanyahiin oo ay dhulkan galeen iyagoon qarxin markii ay diyaaradu soo tuurtay,.
Tani waxay ku tusaysaa in dhibta ka taagan Somaliland ee soo saarida walxaha qarxa oo aad marar badan maqlaysid dad ay ku qarxeen inay qaadan karto boqolaal sano dhamaystirkoodu.